SAYPA oo codsanasa in laga caawiyo xaga dhaqaalaha Barnaamijkeeda Iskutasho |
Urur ay ku bohoobeen Dhalinta iyo Waalidiinta ku dhaqan magaalada Boston ee Gobolka Massachusetts wadankan Maraykanka ayaa ka codsanya in laga caawiyo xaga dhaqaalaha madaama ay ku shaqeeyaan barnaamij ku dhisan isku tasho.
Urukan oo afka qalaad lagu yiraahdo Somali American Youth Parent Association ayaa la’aasaasay kalhore kasoo ay waalidiinta ku dhaqan Maraykan ka iyo ubadkooda ay isku arkaan bil kasta, tasoo lagaga wada xaajoodo arimaha ijtimaaciga ee Jaaliyada.
SAYPA ayaa u xusul duuban in laga baxo ku tiirsanaanta Jaaliyada ee Deeqbixiyaasha Taajiriinta ah, kuna shaqeenaya in ay jaaliyadu iyadu isku tashato waxna qabsato madaama aan waxyaabaha ay sida ba’an ugu baahan yihiin ee ah inay helaan garoomo ay maamushaan, Goobo Xafladeed ay maamushaan, iyo inay helaan meel ay dhaqankooda kusoo bandhigaan bulshaduna isku dhex gasho si ay isugu faa’ideeyaan hadba waxa ka cusub Badee’ada ay ku noolyihiin ee Maraykan.
Madaxa SAYPA Samira Ahmed ayaa fariintan hawada usoo marinasa cidwalba oo daneenasa noolaynta dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed, iyo in bulsha loosoo bandhigo wanaaga dhaqankeena lagu baraarujiyo dhalinta macanaha dhaqanka Soomaaliyeed. Waatan Fariintii
Kudeeq $20 Adiga oo isticmaalya Bogan